Waa Maxay Koronafayrus ? | CeelGardi News
Home Articles Waa Maxay Koronafayrus ?
Qarnigan aynu ku jirno bilowgiisii waxa inaga soo krodhay saddex koronofayrus oo kale oo intuba ka soo boodeen xawayaan ama xoolo (zoonotic baa markaa loo yaqaan). Horantii 2003kii waxa dad qaadeen cudur neef mareenada ku dhaca oo loo bixiyey Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) waxana sababay koronfayrus ka soo booday Civet cats, waa xayawaan xoorka u dhow.
Koronofayruskaa waxa loo bixiyey SARS-CoV. Sanadkii 2012 waxa lagu arkay dalka Saudi Arabia fayrsus kale oo iyanna sababta cudur isna neef mareenada wax yeela oo isna loo malaynayo inuu ka yimid xoolaha geela iyo fiidmeerta. Cudurkaana waxa loo bixiey Middle Eastern Respiratory Syndrome ama MERS, fayruskiina waxa loo bixiyey MRRS-CoV.
Markaa waxa kala qaada labada qof ee isu dhow ama istaabta sida gacan qaadka oo kale oo haddii qof qabaa gacantiisa ku qufaco ama si kaleba ay gacantiisu fayruska u sidato qofka gacan qaadaa uu isna qaadayo haddii isna wajigiisa gaadhsiiyo fayruskii, ama haddii qofkii qabay kaga tago tusaala ahaan miisaska dushooda oo dadka kalena taabtaan.
• Ha la kala fogaado… Social Space—- ilaa 6 cagood inta ugu yar.
• Marwal oo aad wax taabataba gacmaahaaga ku mayd saaboon 20 ilbidiqsi ugu yaraan.
• Caadayso inaanad wajigaaga afkaaga ama sankaaga taaban. Caadi ahaan qof walba intaa wuxuu sameeyaa saacaddii 23 jeer, maaha wax fudud.
• Haddii aad yeelato calamadihiisa hoos ku xusan, Khasab iskaga dhig inaad ka foogaato dadka kale xataa gurigaaga isku khasabto inaan laguu soo dhowaan ilaa la hubinayo.
• Qofka qaba ama shakiyaa waa inuu xidhaa MASKA loo yaqaan surgical mask si uu dadka kale uga ilaaliyo.
• Neefta oo qabata
• Waxaanu ku dambayn karaa pneumonia ama OOF.
• Biyaha oo aad badsato
• Xumad jabin (caruurta ha siin aspirin), dhakhaatiir fransiis ah waxay leeyihiin yaa
• n la qaadan ibuprofen iyo kuwa la mid ka ah ee ha la qaato Acetaminophen (Paracetomol, Tylonol).
• Ku luqluqo biyo diiran oo milix leh si cunna xanuunka u yaraado.
Also MSc, Microbiology and Immunology and a Bachelors in Chemistry and Microbiology
Previous articleWarbaahinta Kenya Oo Ka Hadlay Maalgashiga Soomaaliland
Next articleHaayada shaqaalaha Dawlada oo go.aan ka soo saartay Finger printer iyo Bugaagta xaadirksa
Madaxwaynuhu xaq wuu u leeyahay inuu marlabaad tartamo laakiin wadada uu u marayo waan dhaliilay